Terms of service – Win Tun Naing
Terms of service of "Win Tun Naing's Website"
Read the following terms carefully before you use this website. By using this website, it indicates you agree with the following terms. And if not so, do not use this website.
ဤဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးမပြုမီ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ဤဝက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည်အောက်ပါစည်းမျဥ်းများကိုလက်ခံရာရောက်ပါသည်။ အောက်ပါစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ("စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ") ကိုလက်မခံနိုင်ပါက၊ ဤဝက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
Web content such as text, applications, graphics, images, music, photos, sound, videos, animations and other ingredients has protected by copyright law, trademark law, patent law and other proprietary rights and laws. You are not allowed to download, republish, copy, reprint, modify, rewrite, distribute, lease the license, publicly display, make public and support the business (including commercial use) without the consent of Win Tun Naing. You are not allowed to change the trademark, logo and other copyright information of this website content (including software, HTML code and other codes) without the prior written approval of Win Tun Naing.
စာသား၊ အပလီကေးရှင်း၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ရုပ်ပုံ၊ ဂီတ၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ သက်ဝင်ရုပ်များနှင့် အခြားအရာများဖြစ်သည့် ဝက်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာတို့ကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် အခြား မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဥပဒေများဖြင့် အကာအကွယ်ပြုထားသည်။
ဝင်းထွန်းနိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဝက်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရေးသားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လိုင်စင်ငှားရမ်းခြင်း၊ လူသိရှင်ကြားပြသခြင်း၊ လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုခြင်းမရှိစေရ။ ဝင်းထွန်းနိုင်၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ (ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ HTML ကုဒ်နှင့် အခြားကုဒ်များ အပါအဝင်) ဤဝက်ဆိုဒ်ရှိ အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂိုနှင့် အခြားသော မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။
You are not allowed to use or display any trademarks, logos or service marks of the website. Win Tun Naing reserves the right to hold the copyright of any intellectual property.
သင်သည် ဝက်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆို၊ လိုဂို သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားကိုမဆို အသုံးပြုခြင်း၊ ပြသခြင်းမပြုရ။ မည်သည့်ဉာဏပစ္စည်းအတွက်မဆို မူပိုင်ခွင့်သည် ဝင်းထွန်းနိုင် လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။
Data protection is our priority on this website. Data protection regulations of the corresponding countries secure your private information such as names, addresses, email addresses and phone numbers. Private data on this website are fully protected by technically and institutionally safeguarding programs.
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးသည်ဤဝက်ဆိုဒ်၏ အထူးဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဖြစ်သည့် အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် စသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဝက်ဆိုဒ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။ ဤဝက်ဆိုဒ်မှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအမံများစွာဖြင့် အပြည့်စုံဆုံးကာကွယ်ထားသည်။
Cookies are small digital signature files that store your information upon consent while visiting the website. Cookies may also be used to track your return visits to Win Tun Naing’s website. Although you can block the cookies from your browser setting, this may prevent you from access to certain features of the website.
Cookies ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
Cookies သည် သေးငယ်သော ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝက်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချိန်ရှိ မှတ်တမ်းယူခွင့်ပြုထားသည့် အချက်အလက်များကိုသာ သိမ်းဆည်းပါသည်။ ဝင်းထွန်းနိုင်၏ဝက်ဆိုဒ်သို့ ပြန်လာလည်ပတ်မှုများကိုခြေရာခံရန် Cookies တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့် Browser setting မှတစ်ဆင့် Cookies တို့ကို ပိတ်ထားနိုင်သော်လည်း ၎င်းကြောင့် ဝက်ဆိုဒ်၏ အချို့အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြုမရဘဲရှိနိုင်သည်။
This website may include links that lead to other websites with marketing or other intentions. These are neither arranged nor governed by Win Tun Naing. The website is not responsible for any linked or referred content.
ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်စေ အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်စေ တခြား ဝက်ဆိုဒ်သို့လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်ပြီး ထိုလင့်ခ်များအတွက် ဝင်းထွန်းနိုင်အနေဖြင့် စီစဉ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ယခုဝက်ဆိုဒ်မှ ရည်ညွှန်းထားသော အကြောင်းအရာများ၊ လင့်ခ်များအတွက် ဝင်းထွန်းနိုင်တွင် တာဝန်မရှိပါ။
We do not guarantee that this website shall meet your requirements and the results by using this website or the correctness, quality and reliability of the information obtained from this website. You are the sole person responsible for any loss of data or computer system arising from using the downloaded file obtained from this website, any material or data obtained by any other means.
ဤဝက်ဆိုဒ်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်ဝက်ဆိုဒ်ဟု အာမမခံပါ။ ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရရှိလာမည့်ရလဒ်များ သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ်မှတဆင့် ရရှိလာသော အချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှု၊ အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဝက်ဆိုဒ်ဘက်က အာမခံချက်မရှိပါ။ ဝက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိထားသော ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ရရှိထားသော မည်သည့်ပစ္စည်း၊ မည်သည့်ဒေတာကြောင့်မဆို သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်ပျက်စီးပါက သို့မဟုတ် ဒေတာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သင်တစ်ဦးတည်းတွင်သာ တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိနားလည်ပါသည်။
You agree to indemnify Win Tun Naing and his directors, officers, employees, agents, affiliate trademarks, subsidiaries, parent companies and partners the costs and expenses without limitation (including reasonable attorneys’ fees and cost) for the responsibilities, losses, complaints, claims, disputes and damages for the results directly or indirectly arising from using of this website. Moreover, fully collaborate with Win Tun Naing in fulfilling your obligations.
ဝက်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသောရလဒ်များကြောင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ တိုင်ကြားမှု၊ တောင်းဆိုမှု၊ အငြင်းပွားမှု၊ နစ်နာမှုတို့ပေါ်ပေါက်ပါက သင့်အနေဖြင့် (သင့်တင့်သော ရှေ့နေစရိတ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအပါအဝင်) ကုန်ကျစရိတ်၊ အသုံးစရိတ်တို့အတွက် နစ်နာသူ ဝင်းထွန်းနိုင် နှင့် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ တွဲဖက်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ လက်အောက်ခံများ၊ မိခင်ကုမ္ပဏီများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများကို အကန့်အသတ်မရှိ လျော်ကြေးပေးမည်။ ထို့ပြင် ဝင်းထွန်းနိုင် ဘက်က တောင်းဆိုမှုများအတွက် သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အညီ အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။